Etu esi ege egwu na elele amamịghe (Android, Apple na ndị ọzọ) ulator Emulator.online ▷ 🥇
Mgbe ị na-ekpebi ịzụta smartwatch, ị kwesịrị ị na-enyocha ya arụmọrụ na usoro nke egwu egwu- Ọ ga - arụ ọrụ naanị dịka ụdị ntanetị dị anya maka ama gị ma ọ bụ na ọ ga - enwe ike iyi egwu na mmekọrịta songs otú i nwere ike ige ha ntị n'ebe ọ bụla?
Na nke ahụ ọtụtụ ngwa egwu dị iche iche na nyiwe nyiwe dị na ahịa, azịza nke ajụjụ a nwere ike ịdị obere karịa ka ị nwere ike iche, ọkachasị ebe ọ bụ na ọ gaghị ekwe omume ịrụ ọrụ egwu ahọpụtara yana ngwaike arụnyere na smartwatch. Anyị ga-ahụ, n'etiti ihe ndị ọzọ, na paragraf ndị na-esonụ, n'eziokwu, nkwado kachasị mma maka egwu egwu na-adịghị n'ịntanetị adịghị abịa site na nlele amamịghe nke Apple na Google mepụtara.
Nke a bụ ihe niile ịchọrọ ịma iji mara ike nke smart ese na-egwu music ma site na ekwentị gị na onwe ha.
G ALKWUO: Smartwatches kacha mma: Android, Apple na ndị ọzọ
Dịka onye ndu ahịa na smartwatches, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya naOge nche Apple nye onye ọrụ ọtụtụ nhọrọ maka ịge egwu na ụdị ọdịyo ndị ọzọ; Egwu Apple N'ezie, ọ bụ nhọrọ kachasị pụta ìhè: ngwa ahụ na-ahapụ gị ijikwa egwu egwu na ekwentị gị site na nkwojiaka gị, ma ọ bụ iyi egwu ozugbo na Apple Watch site na ịge ya ntị na ekweisi. Bluetooth.
Site na ịdenye aha na Apple Music, ị nwere ike iyi ya egwu obula na katalogi ma ọ bụ nụ ihe niile ejirila kọmputa zụta ma webata na smartwatch.
Ọ bụrụ na ọrụ ndị ahụ dakọtara na elekere ahọrọ, egwu egwu nwere ike ịga ozugbo na Apple Watch site na WiFi O LTE; Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị nọghị ebe dị anya na ịntanetị ma chọọ ịhapụ ekwentị gị n'ụlọ, ị nwere ike ịmekọrịta abụ na Apple Watch n'ọdịnihu site na ịga Elekere m dị na Apple Watch ngwa dị na ekwentị gị, wee banye na Egwu mi Tinye egwu. Mmekọrịta ga-arụ ọrụ naanị mgbeOge nche Apple nọ n'isi.
kwa Spotify nwere a raara onwe ya nye ngwa n'ihi naOge nche Apple nke enwere ike iji strimụ egwu egwu ozugbo na nkwojiaka gị ma ọ bụ ijikwa playback na ngwaọrụ ọzọ. Na mgbakwunye, ekele maka mmelite na-adịbeghị anya, ọ na-arụ ọrụ ugbu a na ngwaọrụ mkpanaka na Wi-Fi, na-enye gị ohere ịpụ na-enweghị ekwentị gị.
Agbanyeghị, achọrọ isi iyi njikọ data elekere ma ọ ka na-agaghị ekwe omume ịmekọrịta listi ọkpụkpọ na elekere maka ige ntị na-anọghị n'ịntanetị.
Mgbe ahụ enwere ngwa, Egwu Youtube, raara nye Apple Watch, mana ejiri ya iji nyochaa ọbá akwụkwọ egwu gị ma jikwaa playback na ngwaọrụ ndị ọzọ. Enwere ike ịchọta ọrụ ndị yiri ya na ngwa ahụ Deezer nke Apple Watc dere.
Google Wear sistemụ
The smartwatch n'elu ikpo okwu nke Google i nwere na mejuputa atumatu zuru mmekọrịta nkwado maka Egwu Youtube na, na-eburu n'uche eziokwu ahụ Egwú Google Play ewepụla ya, ọ bụ ihe ịtụnanya. Otú ọ dị, ọ ga-ekwe omume iji Jiri OS ịchịkwa isi ọrụ nke Egwu Youtube na ama gị.
Ihe ndị dị n’elu metụtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ egwu niile - enweghị ngwa Jiri OS raara nye ọrụ enyere ihe atụ maka Apple Watch, n'ihi ya, ọ dịghị ndepụta ọkpụkpọ mmekọrịta.
Njikwa playback ga-apụta na smartwatch gị oge ọ bụla ngwaọrụ ahụ android na-arụ multimedia ọdịnaya ma site na ngwa ahụ na site na pọdkastị ọkpụkpọ, mana gafere ịmalite na ịkwụsị playback, enweghi ọtụtụ ihe ị ga - eme ma ọ ka ga - adị mkpa iji gị na - ebu ama gị.
Nanị ọrụ egwu nwere ngwa dakọtara na ya Jiri OS es Spotify Ọ bụ ezie na ọ naghị enye ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ karịa ihe ị nwetara site na njikọta ọkọlọtọ android con Jiri OS: You nwere ike tinye songs gị music n'ọbá akwụkwọ si gị nche na ịgbanwee n'etiti playback ngwaọrụ, ma ị nwere ike enuba music ozugbo gị nche, na ị na-apụghị mekọrịta tracks maka offline na-ege ntị.
Iji kpọọ egwu na igwe elekere Jiri OS na-enweghịkwa mkpa a ekwentị, naNhọrọ ka mma bụ ngwa NavMusic nke na-enye a oge ikpe n'efu mgbe nke a gasịrị ịkwụ ụgwọ: ọ bụ obere ngwa dabere na mbufe nke faịlụ mpaghara na elekere gị, si otú a nweta egwu achọrọ na usoro dijitalụ.
Fitbit, Samsung na Garmin
Ogwe ọ bụla nke Fitbit su Amaokwu Lite na-enye gị ohere ijikwa egwu mgbe ị na-egwu egwu na ekwentị ejikọrọ na ya, site ngwa ọ bụla họrọ iji. Na nche ma e wezụga Versa Lite na Sense na Versa 3 ọhụrụ, na-agbakwunyere ọrụ igwe ojii, ịnwere ike ịmekọrịta egwu egwu dijitalụ enwetara na ngwaọrụ gị site na ngwa ahụ Fitbit Jikọọ.
Nakwa na nke a Spotify ịrara a pụrụ iche ngwa ka smart ese Fitbit, ma ọzọkwa ọ na - enye gị ohere ịchịkwa ọkpụkpọ na ngwaọrụ ndị ọzọ: n'eziokwu, ọ gaghị ekwe omume ịmekọrịta listi ọkpụkpọ na elekere. Ngwa ndị a na-enye gị ohere ịme nke a, na ngwaọrụ ọ bụla. belụsọ Versa Lite, A bu m Deezer mi Pandora. N'ịchọ, ya mere, ige egwu ya Fitbit Na-enweghị inwe ekwentị gị kemfe, ị ga-eji otu n'ime ndị ahụ gụgharia ọrụ ma ọ bụ detuo faịlụ egwu dijitalụ, dịka akọwara n'elu.
Banyere usoro Samsung Galaxy Elekere, na-amalite ngwa ahụ Egwu Rịba ama na ọ ga-ekwe omume ịgbanwe site na ịchịkwa egwu egwu na ekwentị gaa na nche nke onwe ya: ige egwu na-anọghị n'ịntanetị, ị nwere ike ịmekọrịta egwu dijitalụ na smartwatch ma ọ bụ mee ka ngwa ahụ Spotify raara onwe ya nye na mbipute mbụ -enye gị ohere ka ịmekọrịta ndetuta ọkpụkpọ na smart watch.
Ke akpatre, na mbara elu ugwu nke smart ese Garmin nwere egwu playback nhọrọ yiri ndị ahụ Samsung: You nwere ike iji ndị a clocks ịchịkwa playback si kasị music ngwa na ekwentị gị ma ọ bụ na-egwu mmekọrịta mmekọrịta digital music site na kọmputa gị na Garmin Jikọọ, na-enye gị ohere ịhapụ ekwentị gị n'ụlọ.
Nanị ọrụ egwu dakọtara na ngwa ala nke otu wearables bụ Spotify na, dị ka ọ dị na ngwaọrụ ndị ahụ Samsung, ndị debanyere aha Spotify Premium ha nwere ike ịmekọrịta ndepụta ọkpụkpọ na ngwaọrụ Garmin iji gee ha n'ebe ọ bụla.
G ALKWUO: Kedu smartwatch ịzụta na 2021
Otu esi ehichapụ kuki na Chrome, Firefox, Edge na Safari
SmartBands kacha mma, echekwa na arụ ọrụ dịka igwe elekere
Etu esi edozi vidiyo na TikTok
Esi kpọghee bootloader na Xiaomi